एमाले-माओवादीले बनाए ९ सदस्यीय ‘हाइकमाण्ड' !
काठमाडौं । नेकापा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछी बन्ने नयाँ पार्टी नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमा दुई दलबाट ९ सदस्यीय हाइकमाण्ड बन्ने भएको छ। यो हाईकमाण्डले भनेको निर्णय नै पार्टीको निर्णायक निर्णय हुनेछ।
बिहिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा एकता समायोजन समितिको बैठकले यस्तो हाईकमाण्डको गठन गरेको हो आज बनेको दूई पार्टी सम्मिलित हाइकमाण्डमा एमालेको तर्फबाट अध्यक्ष केपी ओली, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, बिष्णु पाैडेल रहेका छन्। त्यसैगरी माओवादीबाट भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नारायणकाजी श्रेष्ठ, रामबहादुर थापा बादल छन्। यो हाइकमाण्डमा दुई अध्यक्षता केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नै गर्नेछन् । हाई कमाण्डको महासचिवको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई दिईएको छ ।
त्यसैगरी आज घोषणा हुने एकीकृत पार्टीको स्थायी कमिटी ४३ सदस्यीय हुने भएको छ। जसमा एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ नेता हुने भएका छन् । त्यस्तै केन्द्रीय समिति भने ४४१ सदस्यीय हुने छ। जसमा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० नेता रहने सहमति भएको छ।
प्रकाशित : बिहिबार, जेठ ०३, २०७५१६:३९
नेकपा एमाले र माओबादी केन्द्र भङ्ग !
प्रचण्डका घरधनि सरदालाई पनि कारवाही हुन्छ, समयमा कम नगर्ने कसैलाई पनि छोडिन्न- गृहमन्त्री थापा
उपमेयर अनशन बसेपछि वडा अध्यक्ष धर्नामा
ओलीले ठाकुरलाई भेट्न मानेनन्, ओलीलाई भेट्ने आशामा ठाकुर कुरेको-कुरै !